Wararka Maanta: Jimco, Apr 5 , 2013-Shirweynihii Dib u Habeynta Garsoorka Soomaaliya oo la soo Gunaanaday iyo Warmurtiyeed laga soo saaray (SAWIRRO)
Warmurtiyeed laga soo saaray shirweynaha ayaa waxaa lagu soo bandhigay qodobbo talooyin u badnaa, wadaana talooyinkaas ka mid ahaa: In si deg-deg ah dib-u-habeyn loogu sameeyo hay’adaha garsoorka iyo kaabayaashooda si waafaqsan dastuurka federaalka iyo xaaladda ka jirta dalka. In si dhaqso ah loo sameeyo guddiga adeegga garsoorka si waafqasan dastuurka. In si dhaqso ah loosoo dhiso maxkamadda dastuuriga si waafaqsan dastuurka dalka iyo kuwo kale oo fara badan.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa khudbadiisa ku sheegay in loo baahan yahay in la qabto wax walba oo la qaban karo, wuxuuna xusay in looga gudbi karo caqabada jira iyadoo lagu kalsoonaado in waqti uun la gaari doono halka la doonayo in la gaaro.
“Innagoo Afgooye u soconna ma wanaagsana inaan ku doodno waqtiga aan gaari karno, haddii qof yiraado maan daqiiqado ku gaarno, qof kalena yiraah maan intaas ku gaarno, waxaa halkaas ka dhalanaya muran, laakiinse waxaa loo baahan yahay inaan isku qacinno waqtiga rasmiga ah ee la gaari karo,” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Madaxweynuhu wuxuu kula dardaarmay ergadii shirkaas kasoo qaybgalay in ay dadaal badan u galaan sidii ay fikaradahooda ugu soo biirin lahaayeen kuwa ay maanta dhiibteen, isagoo xusay inuu rajeynayo in dalka uu helo garsoor cadaalad ah.